St Michel Amparibe: misondrotra kilasy avokoa ny mpianatra | NewsMada
St Michel Amparibe: misondrotra kilasy avokoa ny mpianatra
Nampahafantatra ny ray aman-dreny sy ny mpianatra rehetra ao aminy ny tompon’andraikitry ny kolejy Masina Misely Amparibe, omaly fa mifarana ny taom-pianarana 2019-2020. Mifindra kilasy avokoa ny mpianatra (intermediaire) rehetra fa tsy misy mamerin-taona ho an’ny kilasy rehetra.
Noraisina ho taom-pianarana miavaka ity 2019-2020 ity noho ny fikorontanana nateraky ny valanaretina ka tsy naha marin-toerana ny tetiandro efa napetraka rehetra ary tsy mitovy amin’ny taom-pianarana hatramin’izay.
Hisy anefa ny fotoana manokana hatokan’ny kolejy hamitana ny banga mialoha ny handraisana ny fandaharam-pianarana 2020-2021. Mitaky fiaraha-miasa akaiky amin’ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny ary ny mpianatra ny fanatanterahana izany mba ho tombontsoan’ny zanaka iraisana izay beazina ao an-toerana.
Nisy ny fivoriana intelo miantoana notanterahin’ny tompon’andraikitry ny kolejy ka nahafahana naka izao fanapahan-kevitra izao, araka ny tatitry ny fampahafantarana.
Mikasika ny fandoavana ny saram-pianarana, tsy nisy ny fitakiana tao anatin’izay tsy nianarana izay. Mila manao ezaka manefa ny saram-pianarana 10 volana hatrany ny ray aman-drenin’ny mpianatra alohan’ny hanombohana ny taom-pianarana 2020-2021 ho fanampiana ny kolejy amin’ny fiatrehana ny fidiran’ny mpianatra sy hanomanana ny taom-pianarana vaovao.
Tsy mbola voafaritra kosa hatreto ny fotoana hahafahana manao ny fisoratana anarana ho an’ny taom-pianarana vaovao sy ny daty hidirana mianatra ho amin’izany. Miankina amin’ny fivoaran’ny toe-draharaha eto amin’ny firenena ny fandaminana izany, raha ny fanazavana.